Real Vs. Fake... သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၁၀)... Seamen's Voice-10 ~ MSU Portal
Real Vs. Fake... သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၁၀)... Seamen's Voice-10
5/17/2013 01:27:00 AM Navi Kyaw 1 comment
> လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
> လေးစားအပ်ပါသော နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများခင်ဗျာ.
> ကျွန်တော်တို့ သဘောင်္သားတစ်ရပ်လုံးတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးပြဿနာမှာ အထူး
> စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် South East
> Asia တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား သဘောင်္သားများအား အလုပ်ခန့်အပ်သောကုမ္ပဏီ (၁၀၀ )
> ခန့်တွင် ရှစ်ဆယ်(၈၀) ကုမ္ပဏီခန့်မှာ မြန်မာသဘောင်္သား *(အတု)* များသာ
> လက်ဝါးကြီးအုပ်နေပါသည်။ ၄င်းတို့သည် Shore Job Passport ကိုင်ဆောင်ပြီး C.O.C (
> ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အသစ်ကိုပင်) အဆင့် အမျိုးမျိုးဖြင့် အတုများပြုလုပ်ကာ
> မှ လေဆိပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ( Immigration ) နှင့် သတင်းတပ်ဖွဲ့ ( Special
> Branch ) အား ငွေကျပ် ၅၀၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ပေး၍ အထွက်လုပ်ကာ
> နိုင်ငံခြားသဘောင်္များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
> ၄င်းတို့လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော် နှင့် သဘောင်္သား အမှန်များ
> ၁) ၄င်း တို့သည် မိမိတို့ကိုင်ဆောင်သော ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် အတုများဖြင့်
> သဘောင်္အရာရှိအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးတို့ကို အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပဲ
> တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အတွက် သဘောင်္ကုမ္ပဏီတို့မှ အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ခြင်း
> မြန်မာအရာရှိများအား အထင်သေးအမြင်သေးခြင်း ၄င်းသဘောင်္ကုမ္ပဏီများ ၏ Regional
> Society တွင် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသော မြန်မာအရာရှိများအား
> တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်မပေးရန် အဆိုပြုခြင်း။
> ၂) ၄င်း သဘောင်္သားအတုများသည် သက်ဆိုင်ရာ ရေယာဉ်မှုးကြီးအား C.D.C အတုပေးကာ
> သဘောင်္ပေါ်တွင် အမိန့်မနာခံခြင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်ခြင်း
> ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တိကျစွာနားလည်မှုမရှိခြင်း အမျိူးမျိုးပြုလုပ်ကြပါသည်။
> C.D.C အတုဖြစ်၍ မည်သည့် မှတ်ချက်မျှ ရေးသော်လည်း ထိရောက်မှု မရှိပါ။
> ၃) အစစ်အမှန်သဘောင်္သားများသည် ငွေကြေး၊ အချိန်မြောက်များစွာ အကုန်အကျခံပြီး
> ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအားဖြေဆိုရပါသည်။ သို့သော် ၄င်း အတုများ၏
> လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် သဘောင်္သားအမှန်များသည် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲသဖြင့်
> အလွန်ပင် စိတ်ဓါတ်ကျဆင်း ပျက်ပြားစေပါသည်။
> ၄) နိုင်ငံတော်မှ ရသင့်ရထိုက်သော နိုင်ငံအခွန်လည်း လွန်စွာ ဆုံးရှုံးသည်မှာ
> ၄င်းအတုများသည် အခွန်ပေးဆောင်စရာမလိုခြင်း ၊ အစစ်အမှန်များသည်လည်း
> အလုပ်မရသဖြင့် နိုင်ငံတော်အားအခွန်မပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်
> နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နှစ်ကြိမ် ဆုံးရှုံးမှုရှိပါသည်။
> ၅) ၄င်း လက်မှတ်အတုကိုင်ဆောင်သူများ၏ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီ
> အသီးသီးတို့သည် မြန်မာ သဘောင်္သားများနှင့်သဘောင်္အရာရှိများအား
> အထင်အမြင်သေးကာ မိမိတို့ကိုင်ဆောင်သော လက်မှတ်အဆင့်အတန်းနှင့်
> များစွာနိမ့်ကျသောရာထူးများဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရပါသည်။
> ၆) ယခု လတ်တလော ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပျက်သွားသည့် H.R.C Shipping Limited ,
> Bangladesh ပိုင် M.V.Banga Bodor သဘောင်္တွင် လက်မှတ်အတု ကိုင်ဆောင်သော
> အင်ဂျင်နီယာချုပ် ( Chief Engineer ) ဦးသံတူနှင့် ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာ
> ဦးကြည်ဝင်း ၊ တတိယ အင်ဂျင်နီယာ အသီးသီးတို့သည် အလွန်ပင် အတင့်ရဲစွာ
> လက်မှတ်အတုဖြင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်သည့် သဘောင်္ (M.V.Banga Bodor )
> ပေါ်တွင် လိုက်ပါ အမှုထမ်းနေသည်ကို D.M.A မှ တွေ့ရှိပါသောကြောင့် အရေးယူထားသည်
> ကို သိရှိရပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရပ်များ များစွာရှိသော်လည်း D.M.A မှ မသိရှိရန်
> S.A.D မှ ဖုံးကွယ်ပေးထားသည့်အလားတူဖြစ်ရပ်များရှိပါသည်။ S.A.D အား တစ်ဦးလျှင်
> ကျပ်ငွေနှစ်သိန်းလာဘ်ထိုးကာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ပင် လက်မှတ်အတုနှင့်
> ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဝင်နေသည့် သာဓကများလည်း များစွာရှိပါသည်။
> ၇) ၄င်းအတုများသည် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်ရောက်လာသော အခါတွင် ၄င်းတို့၏ Pass
> Port များတွင် သဘောင်္တံဆိပ်များ ပါရှိနေပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
> (Immigration) နှင့် သတင်းတပ်ဖွဲ့ (Special Branch ) တို့အား US$ ၁၀၀ ခန့်ပေး၍
> နားလည်မှုယူကာ မည်သည့်အခက်အခဲမျှမရှိပဲ ၀င်ထွက်နေကြပါသည်။
> ၈) ၄င်းတို့ကိုင်ဆောင်သော Job Passport များသည် မည်မျှပင်
> သဘောင်္တံဆိပ်တုံးများပါရှိစေကာမူ မည်သည့်အခက်အခဲ
> တစ်စုံတရာမျှမရှိပဲ(မည်သည့်အခွန်မျှ ပေးဆောင်ရခြင်းမရှိပဲ)
> အသစ်ပြန်လည်လဲလှယ်သော အခါတွင် လွယ်ကူစွာ မူလနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏
> နံပါတ်အတိုင်းရရှိခြင်း/ နံပါတ်အသစ်ရရှိခြင်းတို့မှာ
> ၉) ၄င်းတို့ ကိုင်ဆောင်သည့် C.D.C အတုများ၏ နံပါတ်များသည် အခြား သဘောင်္သားတို့၏
> နံပါတ်များကို ခိုးယူသုံးစွဲထားပါသဖြင့် အမှန်သဘောင်္သားများသည်
> ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သည့်အခါ S.E.C.D နှင့်သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ Flag
> State နှင့်သော်လည်းကောင်း ဖြေရှင်းရပြီး Black List ( ဥပမာ-Panama Black List
> ) ၀င်သွားပြီး သက်ဆိုင်ရာ Flag State License များ လျှောက်သောအခါ Reject ထိ၍
> ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်မှတ်အတုများကို များစွာ မွေးထုတ်ပေးသော
> သဘောင်္သား အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများမှာ-
> ၁) ယခင် Navy trade S.E.C.D မှ Pending လုပ်ထား၍ ယခု Oscar Nelson
> လိုင်းအမည်ခံကာ ဦးရဲနိုင်ဝင်း ၊ မအိ
> ၂) Noah Marine(ဦးကျော်ဆန်းထွန်း) စံပါယ်ရုံလမ်း၊ ပါရမီရိပ်သာ၊
> ၃) G.S.M (ကိုလတ်) M.G.W Tower တွင် တည်ရှိသည်။
> ၄) Western Marine (ဦးဝင်းအောင်) ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်အနီး မဟာဗန္ဒုလလမ်းပေါ်
> ၅) M.G.M.C ( ဦးဝင်းသီဟမောင် ) အမှတ်၄၄ ၊ ၄၄လမ်းအောက်ပိုင်း တည်ရှိသည်။
> ၆) O.M.C 2000 (ဦးမြင့်သန်း)
> ၇) Leo Shipping ( ဦးမောင်မောင်ဇော်) M.G.W Tower တွင်တည်ရှိသည်။
> ၈) NST (ဦးမျိုးဦး) M.G.W Tower တွင်တည်ရှိသည်။
> ၉) CYC ST (ဦးမျိုးမြင့်) မဟာဗန္ဒုလလမ်း ဗိုလ်တထောင်။
> ၁၀) ( ဦးခင်မောင်ချို) ၁၀မိုင်ကုန်း ကားမှတ်တိုင်အနီး
> အစရှိသည့် အထက်ပါကုမ္ပဏီများသည် ကျွန်ုပ်တို့ လက်လှမ်းမှီသလောက်
> အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ( Shore Job Passport )
> ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတုများကိုင်ဆောင်သူ သဘောင်္သားအတုများအား ၀န်ဆောင်ခ အဖြစ်
> လစာ ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ မှ ၂၅၀၀ ) ကြားဝန်ဆောင်မှုယူကာ
> အတုများအား နိုင်ငံတော်နှင့် သဘောင်္သားအမှန်များ၏ အကျိုးကို မကြည့်ပဲ မိမိတို့၏
> ကိုယ်ကျိုးသက်သက်ဖြင့် မသမာစွာ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးနေပါသည်။
> ၄င်းကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်အတုများတွင် နိုင်ငံတော်တံဆိပ်နှင့်
> ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်ရေကြောင်းဦးစီးဌာန၏ လက်မှတ် ပါ
> အတုပြုလုပ်သုံးစွဲထားပါသဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်တကွ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဌာန
> ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်ပါအရှက်ရစေပါသည်။၄င်း လက်မှတ်အတုများ
> တရားမ၀င်ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသော ပွဲစားများကို မဟာဗန္ဒုလလမ်းမပေါ် ရွှေခရားကြီး
> လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တ၀ိုက် / ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဒုလလမ်း ထောင့်
> မီးပွိုင့်နှင့် လမ်းထောင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင် / ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမအလယ် M.G.W
> Tower အရှေ့ ဗလီ အနီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင် များတွင်
> အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ထို့အတူ ယခု Scan လုပ်၍ ဖော်ပြပေးထားသော C.O.C
> အတုမှာ ဦးသိန်းဇော် (အရှည်ကြီး) ရွှေလင်ပန်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေး လမ်း၄၀ ထိပ်
> နှင့် ၄င်းတို့အပေါင်းအပါများ၏ လက်ရာဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဦးစိန်လုံး
> သည်လည်း အတုလောကတွင် အလွန်ကျော်ဇောပါသည်။၄င်းတို့သည် အတုစာအုပ်တစ်အုပ်(C.O.C)
> အား မြန်မာကျပ်ငွေ ၂သိန်းခွဲမှ ၃ သိန်း နှင့် အခြားသော ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (4
> ticket, ARPA, AFF, PSCRB, G.O.C, M.F.A, etc.,) တစ်စောင်လျှင် ၅၀၀၀ကျပ် ယူကာ
> ထိုလက်မှတ်အတုလုပ်သူ ပွဲစားများသည် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေဒေသ တာဝန်ရှိသူများ၏
> လစ်လျူရှုမှုကို အခွင့်ကောင်းယူကာ အတင့်ရဲစွာ လမ်းမ ပေါ်တွင်ပင်
> ယခု ပန်ကြားအပ်သော အစီရင်ခံစာမှာ အခြေအမြစ်မရှိပဲ ရေးသားသော
> တိုင်စာပစ်စာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ် အပါအ၀င် သဘောင်္အရာရှိအမှန်များနှင့်
> ၄င်းတို့၏ မိသားစုများ ၏ ခံစားချက်ကြီးသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခု
> ပေါ်ပေါက်လာသော ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ယုံကြည်၍
> အားကိုးသောကြောင့် ၄င်း အနှစ်နှစ်အလလ မသမာမှုကြီးကို ဖော်ထုတ်ပြီး အနာဂတ်
> သဘောင်္သားများနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစု စား ၀တ် နေ ရေး လုံခြုံစိတ်ချစေရေးအတွက်
> ယခု နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ၊ ဒုဝန်ကြီး နှင့် ညွှန်ချုပ်
> ( D.M.A ) တို့သည် တပ်မတော် တွင် နာမည်ကောင်းဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး
> ယခုအချိန်ထိ နိုင်ငံတာဝန်များကိုိ တိကျကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု
> သိရှိရပါသောကြောင့် အထက်ပါ မသမာမှုကြီးအား တရားဥပဒေနှင့်အညီ
> ဖော်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လေးစားစွာ တင်ပြအစီရင်ခံအပ်ပါသည်။
> ကျွန်ုပ်တို့ သဘောင်္သားအမှန်များဘက်မှလည်း အတုသဘောင်္သားပါဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရှိပါက
> သက်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် (Habour Master) များအားလည်းကောင်း ၊
> ရေယဉ်မှုးကြီး ( Onboard Captain) ၊ (P.S.C officer ) ၊ D.M.A ၊ Habour Police
> များထံသို့ မည်သူ၏ မျက်နှာမျှမထောက်ထားပဲ ဆိုက်ရောက်ရာဆိပ်ကမ်းတွင် ချက်ချင်း
> တိုင်ကြားကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
> သဘောင်္အရာရှိကြီး များနှင့် အရာရှိများ
Posted in: advice,knowledge,news,Seamen's Voice
February 27, 2014 at 6:13 PM Reply
Do you think shore job person only?Also,real seamen do like that.Do you know why they do like that?If you didn't know you should inquire about that I think so,that case became by DMA.